KDE ၌Trojitá, IMAP အီးမေးလ်ဂလိုင်းပါ ၀ င်သည် Linux မှ
အလက်ဇန်းဒါး (ခေါ် KZKG ^ ဂါရာ) | | applications များ, GNU / Linux များ
ငါမသိသောအဖြစ်သူသည် Trojitaကျွန်ုပ်တို့သည် Qt တွင်ရေးသားထားသောမြန်ဆန်ပေါ့ပါးသော IMAP mail client အကြောင်းပြောနေသည်။ မင်းငါ့ကိုမေးရင်ငါပြောလိမ့်မယ် Trojita ဖြစ်လိမ့်မည် KDE ဘာပဲ Gearyaမူလတန်း OS.
အကြောင်းပြချက် KDE လက်ခံခဲ့သည် Trojita တရားဝင်လျှောက်လွှာတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုမသိပါ၊ သို့သော်၎င်း၏တည်ဆောက်သူကသဲလွန်စအချို့ကျန်ပါသေးသည် ဒီမှာ။ ကျေးဇူးတင်စရာတစ်ခုခုကသူတို့သုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲ Trojita ထည့်သွင်းစရာမလိုပဲ KDE၎င်း၏တီထွင်သူကအနာဂတ်တွင်ကောင်းမွန်သောပေါင်းစည်းမှုကိုရရှိရန်ရွေးချယ်စရာအချို့ရှိသည်ဟုရည်ရွယ်သော်လည်း၊ လျှောက်လွှာ.
ငါကစိတ်ဝင်စားဖို့ရှာပါ Trojita ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည် KDE PIMအထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူ (ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့) သုံးစွဲရန်လိုအပ်သောအလွန်ကောင်းသောမျက်လုံးများဖြင့်မမြင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် KMail နှင့် Akonadiသို့မဟုတ်နေ့စဉ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအသုံးပြုခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
လုပ်စရာတွေအများကြီးကျန်သေးပေမယ့်ငါအစောပိုင်းကကိုးကားခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးအရ Trojita ရပ်ရွာက၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပံ့ပိုးမှုများကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌အရေးပါသောတိုးရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ငါတို့မှာနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသေးတယ်။
Trojitá Stable ကို Download လုပ်ပါ
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့အား installation လုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယခုငါ compile လုပ်ရန်အချိန်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါက၎င်းတို့ကိုသူတို့ install လုပ်ထားသင့်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ g ++ y qt4-qmake.. နောက်မှထိုဖိုင်ကို unzip လုပ်ပြီး directory နှင့် terminal တစ်ခုထဲသို့ရိုက်ထည့်ပါ။ ထို့နောက် execute:
$ mkdir _build; cd _build $ qmake CONFIG + = debug ../trojita.pro $ -j4 ပါစေ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » KDE တွင်Trojitá, IMAP အီးမေးလ်ဂလိုင်းပါဝင်သည်
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ | ကျွန်ုပ်သည် Kmail ကိုပိတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သင်ပြောသည့်အတိုင်းအခြား application များကိုပြီးပြည့်စုံအောင်ဆွဲယူပါ ငါလက်ရှိမိုးကြိုးငှက်ကိုအသုံးပြုသည်။ | ငါ့အဘို့ရိုးရှင်းပါသည်
ငါ debian စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် git ဗားရှင်းပြုစုခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်မှာပြmissingနာမရှိဘူး၊ မှီခိုနေတာပဲ zlib1g-dev.
ဟေ့ငါ Kmail ကိုပိုကြိုက်တယ်၊ ဒါကငါ့အတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ ငါ့အရင် mail manager က Thunderbird ပဲ။ ဒါပေမယ့်သူကနှောင့်ယှက်တာမဟုတ်တဲ့ KDE interface ကငါ့ကိုစိတ်ထိခိုက်စေတယ်